अकस्मात हिमपात, तर रोकिएनन् हिमालतिर बढेका पाइला
मुक्तान थेबा मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८, ०७:०२
आइल्यान्ड पिकको आधार शिविर। तस्बिर : मुक्तान थेबा
मलाई हिउँ मन पर्छ। तर, हिउँ टेक्न पाएको थिइनँ। हिउँ पर्दै गर्दाको अनुभुव लिन पाएको थिइनँ।
गत वर्ष सोलुखुम्बुको नाम्चे, होटल एभरेष्ट भ्यु हुँदै खुम्जुङसम्म पुगेर फर्किएको थिएँ। त्यही बेलादेखि अझ माथिको क्षेत्र सगरमाथा बेस क्याम्प र कालापत्थरसम्म पुग्ने रहर थियो। हिमाली भेगको त्यो जनजीवन, त्यो संस्कृतिले आकर्षित गरेको थियो।
यसपटक मौका जुर्‍यो। मेरा साथीहरु महालंगुर हिमश्रृङ्खला (सगरमाथा क्षेत्र)मा नै पर्ने आइल्यान्ड पिक (६,१८९ मिटर) आरोहण गर्न जाने भए। उक्त हिमाल आरोहणपछि सगरमाथा बेस क्याम्प र कालापत्थर पनि जाने योजना बन्यो।
म साथीहरुसँग निस्किएँ, यात्रामा। तर, मेरो गन्तव्य आइल्यान्ड पिक थिएन। आइल्यान्ड पिकको बेस क्याम्पसम्म मात्र थियो। साथीहरु हिमाल चढेर नफर्किएसम्म मैले त्यहीँ पर्खनुपर्ने थियो। अनि, साथीहरु फर्किएपछि सगरमाथा बेसक्याम्प हुँदै कालापत्थरसम्मको यात्रा तय हुने थियो।
काठमाडौँबाट हाम्रो यात्रा दुई हप्ताअघि सुरु भएको हो। पहिलो दिन लुक्लाबाट मन्जो पुगेर बास बस्यौँ। दोस्रो दिन नाम्चेमा बसियो। अब म तेस्रो दिनको यात्राका लागि निकै उत्साही थिएँ। नाम्चेबाट उकालो लाग्न थालेपछि ती ठाउँहरु मेरा लागि नौलो थिए। ‘लेक लाग्ने हो कि’ भन्ने आशंका पनि थियो।
चौँथो दिन हामी दिङबोचे (४,३४० मिटर) पुग्यौँ। भोलिपल्ट हिमाली भेगको हावापानीमा अभ्यस्त हुन न्हाङकार्साङ पिक (५,२०० मिटर) चढेर फर्कियौँ।
पाँचौँ दिन छ्युखुङ पुग्यौँ। माथि उक्लिँदै जाँदा अधिकांश ठाउँमा मोबाइलले नेटवर्क टिप्दैन थियो। राति होटेलमा ‘चार्ज’ गरेको मोबाइल पनि चिसोको कारण चाँडै सकिन्थ्यो।
छ्युखुङ पुगेको भोलिपल्ट हाम्रो टोली छ्युखुङ ह्री (५,४१३ मिटर) थुम्कोसम्म हाइकिङ गरेर फर्कियो। यसो गर्दा हामीलाई अझ अगाडिको यात्रा सहज पर्ने थियो। लेक लाग्नबाट बच्नका लागि केही माथिको उचाइसम्म पुग्ने र फेरि तल्लो स्थानमा झरेर बस्ने उपाय गर्नु पर्दोरहेछ।
सातौँ दिन आइल्यान्ड पिक चढ्न गएका चार जना तथा भरिया र गाइडको टोली छ्युखुङबाट त्यताको बेस क्याम्प गयो। तर, उनीहरु बेस क्याम्प पुगेको भोलिपल्टै ठूलो हिमपात भयो। यो अकस्मात भएको हिमपात थियो। टोली फर्किएर छ्युखुङमा नै आएर बस्यो। हामी पाँच दिन छ्युखुङमा रोकियौँ।
छ्युखुङ पुग्नुअगाडि लेखक। तस्बिर सौजन्य : दावा शेर्पा
मैले पहिलो पटक यहाँ नै हिमपातको दृश्य देखेँ। बाक्लो हिउँलाई टेकेर हिडेँ। मेरो लागि यो दृश्य नपाउनुको थियो। तर, त्यहीँ हिमाली भेगमा बस्ने शेर्पा दाइ र दिदीहरुका लागि हिमापातले जनजीवन असहज बनाएको थियो।
हिमपात रोकिएपछि आइल्यान्ड पिक आरोहण गर्ने टोलीले फेरि प्रयास थाल्ने भयो। म पनि आइल्यान्ड बेस क्याम्पसम्म गएँ। मेरा साथीहरु गत शनिबार बिहान ६ः४५ बजे आइल्यान्ड पिकको चुचुरोमा पुग्न सफल भए। यो हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली टोली बनेर उनीहरु फर्किए।
तर, हिमपातले बाटैमा रोकिनु पर्दा सगरमाथा आधार शिविर र कालापत्थर पुग्ने चाहना पूरा भएन। हामी त्यहीँबाट फर्कियौँ।
यो लेखिरहँदा (सोमबार साँझ ५ बजे) हामी नाम्चे झरेका छौँ। बुधबार बिहान काठमाडौँ झर्नेछौँ।
ओ सगरमाथा! ओ कालापत्थर! म फेरि आउने छु।
आइल्यान्ड पिक पुगेको टोली। तस्बिर सौजन्य : दावा शेर्पा
पोखरामा पनि केबलकार सञ्चालनमा आउँदै पर्यटकीय नगरी पोखरामा पाँच वर्षअघि निर्माण थालिएको केबलकारको परीक्षण गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका-१८ लेकसाइडस्थित सेतीबाट सराङ्‍कोट... बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
किन धकेले यात्रुले जहाज? चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनलाई मानिसहरुले धकेलेको त तपाईं हामी सबैले देखेका छौं। तर बुधबार कोल्टी विमानस्थलमा एउटा फरक दृश्य देखियो,... बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
लयमा फर्कंदै नेपालको पर्यटन, नोभेम्बरमा भित्रिए २६ हजार पर्यटक बिहीबार, मंसिर १६, २०७८